Zvinokwanisika here kuwana backlinks kubva ku Twitter?
Kuvandudza bhizinesi rako paIndaneti inenge hafu yehondo. Mushure meizvozvo, iwe unoda kuita kuti nzvimbo yako ionekwe nekutsvaga bots uye zvekuti iwe unogona sei vatengi. Nenzira yakanaka, kutsvaga injini yekushanda kunoshanda nekuda kwechinangwa ichi. Especially backlinks inogona kukubatsira kuti uwedzere mararamiro ako uye uite kuti ugare uchitenderera kune mapeji ewebsite. Kuti uwane mhinduro dzeGoogle, pane zvimwe zvinhu unoda zvakawanda zve-backlinks yakakwirira kubva kumaP PR akawanda seGoogle +, Facebook, Twitter, nevamwe. Zviratidzo kubva pawebsite yepamusoro-yepamutemo inoratidza Google kuti yakakurumbira sei nzvimbo yako. Twitter yakakurumbira, inozivikanwa, uye yakakwirira PageRank social platform iyo inogona kupa nzvimbo yako nehuwandu hwehutano hwejusi. Pano iwe unogona kuunza zvakawanda zvepamusoro-soro kumashure pasina kubhadhara chero magetsi. Zvese zvaunoda ndezvokunyora tweet inofadza, shandisa backlinks kune rako rekuda mairi, uye kana zvichikwanisika zvinyorwa zvakakosha zvehahtags.
Muchikamu chino, tichakurukura zvakajeka kuti ungawana sei backlinks panzvimbo yako kubva pa Twitter. Tariro, ruzivo urwu ruchakubatsira kuti uvandudze webhusaiti yako yepamusoro uye ukwezva vamwe vangave vatengi.
Ungashandisa sei purogiramu yako ye Twitter nokuda kwekubatana?
Twitter is popular social social platform inobvumira kugadzira backlinks kuburikidza nayo. Inopa nzvimbo mbiri muhuwandu hwepfumi yako kuti uwedzere maranho ewebhu. Yokutanga ndiyo inonyanya kufarira nzvimbo yacho pachayo, uye yechipiri iri mukati memabhii 160 muBoo chikamu. Uyezve, iwe unogona kuwana hukama kune zvikwangwani zvinokwevera deta kubva kumaprofayiti e Twitter. MaWebvu anotora mashoko kubva Twitter anosanganisira Twellow, Klout, TwitterCounter, Twitaholic, uye Favstar.
Kana iwe usine kambani pamabhuku aya ewebhu, shandisa purogiramu yako ye Twitter kana kuigadzirisa kuti uise marangire ewebsite yako mauri webusaiti webasa uye bio. Uyezve, bvunza vatengi vako kuti vaite zvakafanana.
Pane zvinhu zvakasiyana siyana zvaunoda kuchengetedza mupfungwa dzekuvaka zvikwata pa Twitter. Chokutanga pane zvose, huwandu hukuru hwehusano hwaunogona kuwana pane huwandu hwemagariro evanhu hahufumi. Zvinoreva kuti havapfuuri mutengesi kunzvimbo yako. Zvisinei, hapana nhamba dzinotevera kubva kuWP yakakwirira ine hunokosha pawebsite yako uye kuratidza mairi engororo iyo nzvimbo yako inofanirwa kuve yakakwirira pane peji yehutsva. Chimwe chinhu chaunofanira kuziva pamusoro pekuvaka chikwata pa Twitter ndechekuti zvose zvinosangana pano zvinotarisa se-URL yakashandurwa kana zvichipesana nekubatana nemashoko ekunyora anchor. Ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuve nechokwadi chokuti URL yako inooneka, yakajeka uye yakagadziridzwa.
Tsanangudzo yekusika mazano pamusoro pe Twitter ane matanho anotevera:
Pinda kuA Twitter account uye tweet yako link
Unogona kushandisa vamwe vanofarira uye vanobatanidza magwaro, kwete kungobatana chete. Kungoti tweet yako ichinyorwa, ruzivo urwu ruchawanikwa kune vateveri vako.
Wedzera hashtag isati yasarudzwa keywords
Zvakakosha kushandisa hashtag mushure mezwi rimwe nerimwe rinokosha uye rakakwirira. inotungamirirwa neSERP sevashandisi kutsvaga Twitter kutevedzera hashtags. Nenzira, iwe unogona zvakare hashtag yako links.
Itai kuti vateveri vako vadzokere tweets dzenyu
Tsamba dzenyu dzinofanirwa kunge dzichibata, dzakashata uye dzichinyengedza kuti vashandisi vadzokerezve ivo pachavo. Kana iwe uchinzwa ushayiwa tarenda mumagwaro ekunyora, tangokumbira vateveri vako kuti vadzoke zvakare kubatanidza mukutanga tweet.
TweetMeme inzvimbo inotsvaga uye inopindura zvinyorwa zvinonakidza zvikuru. Saka chinangwa chenyu chikuru ndechekuonekwa pamapeji epaiti yepaiti, nekugadzira chiyeuchidzo tweet Source .